Nhanganyaya kune yekugadzira musimboti uye kushandiswa kweIridescent firimu
Iridescent firimu iri nyowani nyowani, yepamusoro-tech yekushongedza epurasitiki firimu zvinhu. Chishandiso chekugadzira chine hurefu hunopfuura makumi maviri metres chinomomesa zvishoma nezvishoma kristaro yakajeka yepurasitiki, uye kubva kune imwe mugumo kunouya mupumburu weakajeka muraraungu iridescent firimu. Uchishandisa chirevo chekupindira kwechiedza ...
Kupisa kutsika uye kutonhora kutsika maitiro
Iyo yazvino yekutsika tekinoroji yakakamurwa kuita inopisa kupisa uye kutonhora kutsika. Kupisa yekutsikisa tekinoroji inoreva kuendesa iyo foil kune iyo substrate pevhu nekupisa uye kumanikidza iyo foil nesimbi yakakosha yekutsika yekutsika ndiro. Uye kutonhora tekinoroji tekinoroji inoreva nzira yekushandisa ...
Chii chingaunzwe naDichroic hwindo firimu
JUST Wedzera DZIMWE DZIDZISO Dichroic hwindo mafirimu anosanganisa runako, inopenya mwenje uye ruvara neinoshamisa tekinoroji kugadzira yakasarudzika, inokwanisika mhinduro kune yemukati girazi nzvimbo. Iwo anopenya-akachinjika-mavara-anochinja mafirimu anogadzirwa ne pre ...